सरकारको ढुकुटीबाट गाउँपालिका अध्यक्षका भाई देखि सन्तानका लागि मोटरसाईकल ! प्रेट्रोल समेत सरकारबाटै – सुदूरखबर डटकम
सरकारको ढुकुटीबाट गाउँपालिका अध्यक्षका भाई देखि सन्तानका लागि मोटरसाईकल ! प्रेट्रोल समेत सरकारबाटै
सप्तरी, २४ भदौ । जिल्लाको राजगढ गाँउपालिकाका अध्यक्ष परमानन्द यादवले सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । उनले सरकारी कोषबाटै आफ्ना एक भाइ होइन तीन-तीन भाई छोरालाई मोटरसाईकल किनिदिएका छन् ।
गाउँपालिका स्रोतका अनुसार गाँउपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा किनेका मोटरसाईकल मध्ये तीनवटा मोटरसाईकल अध्यक्ष यादवले आफ्ना तीनभाई छोराहरुलाई दिएका हुन् ।
यादवले रु २ लाख ५९ हजार ९ सय मूल्यको १५० सीसीको अभेञ्जर, रु २ लाख ५९ हजार ८ सयको १६० सीसीको होण्डा हर्नेट र रु २ लाख ८ हजार १ सय २९ पर्ने १२५ सीसीको होण्डा साइन मोटरसाईकल छोराहरुलाई किनिदिएका हुन् ।
तीन वटा मोटरसाइकलको मूल्य रु ९ लाख ९७ हजार ८ सय २९ रहेको छ । गाउँपालिकाले मोटरसाइकल खरिद प्रकृयामा पनि कानून मिचेको छ । अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृती बेगर रु ३० लाख १७ हजार २ सय ५६ का १४ वटा किनीएका १२ वटा मोटरसाइकल विना प्रतिस्पर्धा किनेका हुन् ।
अध्यक्षका छोराहरुले चलाउने मोटरसाईकलमा पेट्रोल खर्च समेत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरेको छ । तीन वटा मोटरसाइकलमा एक वर्षमा ६ लाख ६६ हजार ८ सय रुपैयाँको पेट्रोल हालिएको छ ।